ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်ကိစ္စ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အမျိုးသားများ၏လိင်နှင့်ဆွေမျိုးစိတ်ကျေနပ်မှုတို့ကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုနှစ်သက်ခြင်း (2019) - Your Brain On Porn
comments: ဒေတာနှင့်အတူမေးခွန်းထုတ်စရာရေး-Up နှင့်ဂိမ်းကစားရင်းအမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များဖုံးကွယ်: နှစ်ခုလုံး လေ့လာမှုများ (ရုံ2လေ့လာမဟုတ်) လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်သောပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြ နှင့် ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ ဤစာတမ်းသည်ကြားဆက်ဆံရေးမကျေနပ်မှုများအတွက်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအပြစ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမာရ်နတ်ရန်မတရားဝင်နည်းလမ်းရှိသေး၏။ အဆိုပါ2လေ့လာမှုများများအတွက်စားပွဲ:
Miller က DJ သမား, McBain, ka လီ, WW နှင့် Raggatt, PT, 2019 ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Relationships, 26 (1), pp.93-113 ။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, "porn-ကဲ့သို့" လိင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့အ preference ကို (လူတို့သညျနှစျယောကျနမူနာအကြားအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်Nလေ့လာမှု 1 = 326, Nလေ့လာမှု 2 = 335) ။ မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှု, porn ကဲ့သို့သောလိင်အဘို့ သာ. ကြီးမြတ် preference ကိုများနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများပိုမိုမကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ [သုတေသီများကမဟုတ်မမှန်ပြည်နယ်ကြောင်း] ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာလေ့လာ2အတွက်ဆက်ဆံရေးဟာမကျေနပ်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်. အဆိုပါဒေတာ porn ကဲ့သို့သောလိင်များအတွက် preference ကိုမှတဆင့်အယူအဆကြောင့်ညစ်ညမ်းအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုထောကျပံ့မပေးခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးမြှင့်တင်နေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအားကောင်းစေနိုင်သည်။ အဆိုပါဒေတာကိုအဆိုး, သွယ်ဝိုက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းကနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုထိခိုက်ညစ်ညမ်းအတွက်မော်ဒယ်နှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိကြ၏။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်မျိုးစုံဆန့်ကျင်လွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်ပါသည်။